(trg)="2"> Magazini ino haitengeswi .
(trg)="3"> Ndeimwe yemabhuku anoshandiswa pabasa rokudzidzisa Bhaibheri munyika yose uye basa iri rinotsigirwa nezvipo .
(trg)="4"> Magwaro anobva muShanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene , kunze kwokunge pataurwa kuti pane pamwe paatorwa .
(trg)="5"> MAGAZINI INO yeNharireyomurindi , inorumbidza Jehovha Mwari , Mutongi wezvinhu zvose .
(trg)="6"> Inonyaradza vanhu nemashoko akanaka okuti Umambo hwaMwari huri kudenga , hwava pedyo nokugumisa uipi hwose , hwochinja pasi rino kuti rive paradhiso .
(trg)="7"> Inokurudzira vanhu kuti vatende muna Jesu Kristu , uyo akatifira kuti tikwanise kuwana upenyu husingaperi uye uyo ari kutonga iye zvino saMambo weUmambo hwaMwari .
(trg)="8"> Magazini ino yagara ichibudiswa kubvira muna 1879 uye haisi yezvematongerwo enyika .
(trg)="9"> Zvainotaura zvose zvinobva muBhaibheri .
(trg)="2"> 3 Kuverenga Bhaibheri Kwakanakirei ?
(trg)="3"> 4 Ndingaita Sei Kuti Nditange ?
(trg)="4"> 5 Ungaitei Kuti Unakidzwe Nekuriverenga ?
(trg)="5"> 6 Bhaibheri Ringandibatsira Sei Muupenyu ?
(trg)="6"> 8 BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU
(trg)="7"> Ndakanga Ndisingadi Kufa !
(trg)="8"> 10 TEVEDZERA KUTENDA KWAVO | INOKI
(trg)="9"> “ Akanga Anyatsofadza Mwari ”
(trg)="10"> 14 ZVAKAKOSHEREI KUTI UZIVE CHOKWADI ?
(trg)="11"> 16 BHAIBHERI RINOTII ?
(trg)="1"> Unofunga kuti Bhaibheri richiri kushanda here mazuva ano ?
(trg)="2"> Bhaibheri pacharo rinoti : “ Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari uye runobatsira . ” ​ — 2 Timoti 3 : 16 , 17 .
(trg)="3"> Magazini ino inoratidza kuti Bhaibheri rinogona kutibatsira pazvinhu zvipi uye kuti ungaita sei kuti zvaunoverenga muBhaibheri zvikubatsire .
(trg)="1"> NYAYA IRI PAKAVHA | ZVAUNGAITA KUTI UBATSIRWE NEBHAIBHERI
(trg)="2"> “ Ndaifunga kuti Bhaibheri rakaoma kunzwisisa . ” ​ — Jovy
(trg)="3"> “ Ndaifunga kuti harinakidzi . ” ​ — Queennie
(trg)="4"> “ Pandaiona kukura kwaro , ndaibva ndashaya chido chekuriverenga . ” ​ — Ezekiel
(trg)="5"> Wakamboda kuverenga Bhaibheri here asi uchibva warega nemhaka yezvikonzero zvataurwa pamusoro apa ?
(trg)="6"> Vakawanda vanoona sekuti kuverenga Bhaibheri kwakaoma .
(trg)="7"> Asi ko kana ukaziva kuti kuriverenga kunogona kukubatsira kuti ufare uye worarama upenyu hune chinangwa ?
(trg)="8"> Ko kana ukaziva kuti pane zvimwe zvaunogona kuita kuti kuverenga kwacho kunakidze ?
(trg)="9"> Ungada here kumboriedza ?
(trg)="10"> Verenga unzwe zvakataurwa nevamwe vakaona kubatsira kunoita Bhaibheri .
(trg)="11"> Ezekiel , ane makore ekuma20 anoti : “ Kare ndaiita semunhu aingotyaira mota asi asingazivi kwaari kuenda .
(trg)="12"> Asi kuverenga Bhaibheri kwandibatsira kuti ndirarame upenyu hune chinangwa .
(trg)="13"> Rine mazano anobatsira andinogona kushandisa muupenyu . ”
(trg)="14"> Frieda , anewo makore ekuma20 , uye anoti : “ Ndaidziya musoro .
(trg)="15"> Asi kuverenga Bhaibheri kwandibatsira kuti ndizvidzore .
(trg)="16"> Izvi zvakaita kuti ndikwanise kuwirirana nevamwe uye ndava neshamwari dzakawanda . ”
(trg)="17"> Mumwe mukadzi ane makore ekuma50 anonzi Eunice anoti nezveBhaibheri , “ Riri kundibatsira kusiya unhu hwakaipa hwandaiva nahwo , kuti ndive munhu akanaka . ”
(trg)="18"> Kuverenga Bhaibheri kunogona kukubatsira kuti ufare muupenyu sezviri kuita mamiriyoni evanhu , kusanganisira vataurwa pamusoro apa .
(trg)="19"> Richakubatsira pazvinhu izvi : ( 1 ) kugona kusarudza zvekuita , ( 2 ) kuva neshamwari dzakanaka , ( 3 ) kuderedza kuzvidya mwoyo , uye chinonyanya kukosha ( 4 ) kuziva chokwadi pamusoro paMwari .
(trg)="20"> Mazano ari muBhaibheri anobva kuna Mwari , saka ukaashandisa zvinhu zvichakufambira zvakanaka .
(trg)="21"> Mwari haapi vanhu mazano asingashandi .
(trg)="22"> Chinokosha ndechokuti utange kuriverenga .
(trg)="23"> Zvii zvaungaita kuti utange uye kuti uwedzere kunakidzwa nekuriverenga ?
(trg)="2"> Ungaita sei kuti unakidzwe uye unyatsobatsirwa nekuverenga Bhaibheri ?
(trg)="3"> Verenga unzwe zvinhu 5 zvakabatsira vakawanda .
(trg)="4"> Nzvimbo yauchaverengera .
(trg)="5"> Tsvaga nzvimbo yakanyarara .
(trg)="6"> Ita kuti pasava nezvinhu zvinokuvhiringidza .
(trg)="7"> Verengera pane chiedza chakakwana uye panofefetera mhepo .
(trg)="8"> Izvi zvichaita kuti unyatsonzwisisa zvaunoverenga .
(trg)="9"> Iva munhu anoda kudzidza .
(trg)="10"> Sezvo Bhaibheri richibva kuna Baba vedu vekudenga , kana ukaita sezvinoita mwana anoda kudzidziswa nemubereki wake , uchabatsirwa nezvaunoverenga .
(trg)="11"> Kana uine mamwe mafungiro asina kunaka nezveBhaibheri , edza kuabvisa woita kuti Mwari akudzidzise . ​ — Pisarema 25 : 4 .
(trg)="12"> Nyengetera usati watanga kuverenga .
(trg)="13"> Bhaibheri rine pfungwa dzaMwari , saka tinotoda kubatsirwa naye kuti tirinzwisise .
(trg)="14"> Mwari anovimbisa kuti achapa mweya mutsvene kune vaya vanomukumbira .
(trg)="15"> Mweya mutsvene unogona kukubatsira kunzwisisa mafungiro aMwari .
(trg)="16"> Nekufamba kwenguva , uchakubatsira kunzwisisa “ kunyange zvinhu zvakadzama zvaMwari . ” ​ — 1 VaKorinde 2 : 10 .
(trg)="17"> Verenga kuti unzwisise .
(trg)="18"> Usaverenga zvekuti ungopedza .
(trg)="19"> Nyatsodzamisa pfungwa pane zvauri kuverenga .
(trg)="20"> Zvibvunze kuti : ‘ Munhu wandiri kuverenga nezvake ane unhu hwakaita sei ?
(trg)="21"> Zvandiri kuverenga izvi ndingazvishandisa sei muupenyu ? ’
(trg)="22"> Iva nezvinangwa .
(trg)="23"> Kuti zvaunoverenga zvikubatsire , verenga nechinangwa chekuti udzidze chimwe chinhu .
(trg)="24"> Unogona kuzviudza kuti : ‘ Ndinoda kuziva zvakawanda pamusoro paMwari . ’
(trg)="25"> ‘ Ndinoda kuva munhu akanaka , murume akanaka kana kuti mudzimai akanaka . ’
(trg)="26"> Zvadaro , chitsvaga zvikamu zveBhaibheri zvichakubatsira kuita izvozvo .
(trg)="28"> Mazano 5 ataurwa aya achakubatsira kuti utange kuverenga Bhaibheri .
(trg)="29"> Asi zvii zvaungaita kuti kuverenga kwacho kuwedzere kunakidza ?
(trg)="30"> Nyaya inotevera inotaura zvaungaita .
(trg)="31"> Kana usinganyatsozivi kuti ndezvipi zvikamu zvacho zveBhaibheri zvinoenderana nenyaya dzaunoda , unogona kukumbira Zvapupu zvaJehovha kuti zvikubatsire .
(trg)="32"> Usaverenga uchimhanya
(trg)="33"> Dzamisa pfungwa pane zvaunoverenga , uye ita seuri kuona zviri kutaurwa
(trg)="34"> Edza kuona kuti zviri kutaurwa zviri kubatana papi nenyaya yacho yese
(trg)="35"> Tsvaga zvidzidzo pane zvaunoverenga
(trg)="2"> Kuverenga Bhaibheri kuchakunakidza here ?
(trg)="3"> Zvichaenderana nemaverengero auchariita .
(trg)="4"> Ngatitarise zvinhu zvingakubatsira kuti uwedzere kufarira kuverenga Bhaibheri .
(trg)="5"> Shandisa Bhaibheri rinovimbwa naro uye riri nyore kuverenga .
(trg)="6"> Kana ukaverenga bhuku rine mashoko akawanda akaoma kunzwisisa kana kuti aishandiswa kare kare , kazhinji kacho haunakidzwi nekuriverenga .
(trg)="7"> Saka tsvaga Bhaibheri riri nyore kunzwisisa , richabata mwoyo wako .
(trg)="8"> Asiwo Bhaibheri racho rinofanira kunge richitaura chokwadi .
(trg)="10"> Shandisa zvinhu zvemazuva ano .
(trg)="11"> Mazuva ano Bhaibheri haringowaniki rakaita zvekuprindwa chete .
(trg)="12"> Wava kukwanisa kuriverengera paindaneti kana kuridhaunirodha woriverengera pamakombiyuta , matablet kana kuti mafoni .
(trg)="13"> Mamwe maBhaibheri anoita kuti ukwanise kuona mamwe mavhesi anoenderana nenyaya yauri kuverenga kana kuti kuona zvinotaurwa nemamwe maBhaibheri .
(trg)="14"> Panewo maBhaibheri akaita zvekurekodhwa kana uchifarira ekuteerera .
(trg)="15"> Vanhu vakawanda vanofarira kuteerera pavanenge vari mukombi , vachiwacha kana kuti pavanenge vachiita mamwe mabasa anovabvumira kuteerera .
(trg)="16"> Wadii kuedza zvaunoona zvinokuitira ?
(trg)="17"> Shandisa zvinhu zvinokubatsira pakudzidza Bhaibheri .
(trg)="18"> Kushandisa zvinhu izvi kuchaita kuti zvaunoverenga zvinyatsokubatsira .
(trg)="19"> Pane mamepu anokuratidza nzvimbo dzinotaurwa muBhaibheri uye achaita kuti uwedzere kunzwisisa zvaunenge uchiverenga .
(trg)="20"> Nyaya dzakaita sedziri mumagazini ino kana kuti dziri pawebsite inonzi jw.org , pachikamu chakanzi “ Zvinodzidziswa neBhaibheri , ” dzinogona kukubatsira kuti unzwisise zvinorehwa nemavhesi akawanda ari muBhaibheri .